Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Sweden na-abụ onye na-agba ọsọ ihu na ụgbọ elu na-adigide
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Technology • Tourism • Transportation • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Sweden nwere ebumnuche siri ike nke ịbụ onye nweere onwe ya site na 2045. Dịka akụkụ nke ụzọ ahụ, gọọmentị Sweden kwupụtara na 11 Septemba 2020, iwebata iwu mbelata gas na-eme ka mmanụ ụgbọ elu na-ere na Sweden na 2021. Mbelata ọkwa ahụ 0.8% na 2021, ma jiri nwayọ mụbaa ruo 27% na 2030. Nke a mere Sweden enweghị onye ga-ekwenye na ụgbọ elu na-adigide.
“Anyị chọrọ ndị na-agba ọsọ n’ihu na-eduzi ụzọ na ụgbọ elu na-adigide. Ebumnuche dị oke egwu nke gọọmentị Sweden setịpụrụ ugbu a bụ ihe atụ ndị ọzọ kwesịrị ịgbaso iji kwado ụlọ ọrụ ụgbọelu na-ezute ebumnuche mbelata ọpụpụ ya. Ọ na - ewepụta ihe ekwenye siri ike maka ndị na - eme mmanụ ụgbọ elu na - aga n’ihu itinye ego na ịba ụba mmepụta ”, Jonathan Wood, osote onye isi, kwuru. Emegharia ohuru nke Europe na Neste.
Na mbido afọ a, Norway webatara iwu nchikota biofuel 0.5%. A ga-enwe ikike zuru oke n'ahịa iji nye ọtụtụ ebumnuche nke mmanụ ụgbọ elu na-aga n'ihu na Sweden na Norway. Neste na emeputa mpi azuma ahia nke Neste MY Sustainable Aviation Fuel TM, nke esizigharị site na mkpofu ahihia na ihe ndi ozo. N’ụdị ya dị mma ma na ndụ ya niile, mmanụ ọkụ ahụ nwere ike belata ihe ruru 80% nke ikuku gas na-ekpo ọkụ ma e jiri ya tụnyere mmanụ ụgbọ mmiri fosil.
Neste nke na-adigide ọdụ ụgbọ elu ụgbọ elu kwa afọ bụ tọn 100,000 ugbu a. Site na mmụba nke Neste nke Singapore n'ụzọ, yana itinye ego ọzọ na Rotterdam, Neste ga-enwe ike ị mepụta ihe ruru nde tọn 1.5 nke mmanụ ụgbọ elu kwa afọ site na 2023.
Industrylọ ọrụ ụgbọelu nke ụwa ewepụtala nnukwu ebumnuche iji belata ikuku gas na-ebugharị site na njem ụgbọ elu, gụnyere mmụba carbon-na-anọpụ iche site na 2020 na gafere, yana mbelata 50% nke ikuku ikuku ikuku na 2050. Aviationgbọ elu chọrọ ọtụtụ ngwọta maka mbenata ikuku gas. Ka ọ dị ugbu a, mmanụ ụgbọ elu na-adigide na-enye naanị ụzọ ọzọ nwere ike ịgbanwe maka mmanụ ọkụ maka ike ikuku ụgbọ elu.